Iza no nandrehitra ny afo ?La dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarBESO FISAKA EDITORAL EDITORIALIza no nandrehitra ny afo ?
Iza no nandrehitra ny afo ?
Mafampana ny toe-draharaha nohon’ny hetsika sendikaly izay mandrahona fitokonana etsy sy eroa. Ho sarotra ihany ny toe-draharaha hoan’ny Praiministra Ntsay Christian satria na dia eo aza ireo minisitra maroloko ao anatin’ny governemanta iraisana dia any aminy aloha no tena miantefa ny baolina. Ny mampametra-panontaniana dia hoe tsy mahita ny zava-misy ve sa mody tsy mahita ny fahasahiranana efa sedrain’ny firenena ireto sendikalista ireto ka volana vitsy mialohan’ny fifidianana no manao fangatahana mihoampampana izay efa fantatra mialoha fa tsy ho azo tanterahina mihitsy? Azo lazaina ho main’ny afo natsangany ihany aloha ankehitriny ny Mapar satria izy ireo no nandrehitra ny afo nanetsika ireto sendikalista ireto mba hamelombelomana ny hetsika etsy amin’ny 13 mey. Ary rehefa nahazo seza izy ireo dia tsy menatra akory nitsipaka ambavafo ireo izay natao tohatra fotsiny niakarana ao anaty fitondrana. Tsy nisy na iray aza amin’ireo sendikalista nitolona sy nitaninandro teny amin’ny 13 mey nomena sezana ministra na farafaharatsiny toerana ambony any amin’ireny ministera ireny fa dia izy samy izy ihany no nifampizara ny mofomamy. Ankoatran’ny hoe fangatahana tombotsoa amin’ny maha sendika noho izany dia fahasorenana ihany koa no tena manosika ireto sendikalista ireto hitroatra tahaka izao. Zary efa lalaovin’ny mpanao politika loatra izy ireo nohon’ny fahasahiranana ka efa leo ny voadaka ambavafo rehefa tonga amin’ny tanjona iriany ireo mpanao politika. Etsy ankilany, misy ny lesona goavana tokony ho raisin’ireo sendikalista amin’izao toe-draharaha izao. Tokony hanalavitra ny hetsika politika ny hetsika sendikaly. Sehatra roa tsy mitovy ireo ary tokony hitandrina satria mora loatra hoan’ny mpanao politika ny misoavaly ny mpiasa madinika ao anaty fahasahiranana. Mila mandini-tena ireo mpitarika sendikaly mba hamerenan’izy ireo indray ny hasin’izany antsoina hoe sendika izany. Ankehitriny, sarotra no hino fa tsy misy antony politika aorian’ny hetsika sendikaly izay mandrangaranga grevy raha vao mitaky ny zony.
Partager la publication "Iza no nandrehitra ny afo ?"
Emelda Vanderzwaag 16/09/2018 at 20:31 Repondre
Altha Sarles 03/12/2018 at 07:42 Repondre
Joseph Sleva 03/12/2018 at 13:33 Repondre
Wade Stromski 06/12/2018 at 09:48 Repondre
Junior Praylow 06/12/2018 at 10:52 Repondre
Bradford Ciani 08/12/2018 at 03:43 Repondre
Donn Poort 22/12/2018 at 19:21 Repondre
Ernie Sakurai 01/01/2019 at 12:46 Repondre
Quincy Kallenbach 09/02/2019 at 14:55 Repondre